Inforance Group အနေနှင့် ဂျပန်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ပြီးအထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုအားစိုက်၍ ရင်းနှီးလိုပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက် ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာကျောင်းသားများအား ရည်ရွယ်ပြီး အလုပ်ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို လမ်းညွှန်ပေးပါမည်။
ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်သေးသော်လည်း မန်နေဂျာတာဝန် ယူကြည့်လိုသူများ၏ အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းများကို ကြိုဆိုလျက်ရှိ၏။ ဂျပန်နိုင်ငံ နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့ရှိ ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦးစားပေး ခန့်ထားလိုပါသည်။
လုပ်ငန်း ၄ မျိုး လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1.	IGC Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးလိုသည့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများအား ပံ့ပိုးကူညီပေးမည့် လုပ်ငန်းအား လုပ်ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖွဲ့အစည်းစတင် တည်ထောင်လိုသူများ နှင့် လိုင်စင်အမျိုးမျိုးရယူလိုသူများအား ပံပိုးကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသာမကပဲ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများအတွက် စာရင်းအင်းကိစ္စများ နှင့် ဥပဒေအကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များကိုပါ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
2.	Money Buffet
currency exchange နှင့် microfinance လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ၏။ လုပ်ငန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် မှာ ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆိုင်ခွဲများကိုပိုမိုတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကဖီး၊ စားတော်ဆက်၊ ဘား လုပ်ငန်းများကို ယခုထက်ပိုမို ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
4.	GDM Myanmar
စက်ရုံများ၊ ဆိုင်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ၏အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းများအား လုပ်ကိုင်မည့် ဒီဇိုင်းရုံးခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များရှိ အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းအား လက်တွေ့ လေ့လာခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်၏။
သို့ဖြစ်၍ ဂျပန်စာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း သာမက ဆွေးနွှေးနိုင်စွမ်း ရှိသည့် မြန်မာလူငယ်များအား လိုအပ်လျက်ရှိ၏။
မြန်မာနိုင်ငံအား အာရှတိုက်၏ နောက်ဆုံးခံတပ် (the last frontier) အဖြစ်ပြောစမှတ်ပြုကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနာဂါတ်တွင် စီးပွားရေးသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည့် အလားအလာရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လုပ်ငန်းဌာနအားအခြေစိုက်ပြီး မိမိတို့လုပ်ကိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် နည်းဗျူဟာအရ မဖြစ်မနေရွေးချယ်ရမည်ဟု ယူဆ၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုလက်ရှိအချိန်အထိရှိခဲ့သော ယူဆချက်များအပြင် အခြားလုပ်ငန်းများလည်း ပို၍ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။
ကျယ်ပြန့်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း အမြောက်အများ ရှိပါသည်။
•	မြန်မာနိုင်ငံ၌ဝင်ရောက်ရင်းနှီးလိုသည့် ကုမ္ပဏီများအားပံပိုးပေးခြင်း
•	ပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဝန်ဆောင်မှု(Property management)
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လုပ်ငန်းရင်းနှီးဝင်ရောက်မှုအား ကျယ်ပြန့်လာ စေရန် အထောက်အကူဖြစ် အင်အားအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းများကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပို၍ကျယ်ပြန့်လာမည့် လုပ်ငန်းများ၏ ရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်အနေနှင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား များ အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန်အချက်အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိပါသည်။
အမြဲတမ်း ဂျပန်နိုင်ငံဘက်နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းအား ကျယ်ပြန့်စေရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်။
များသောအားဖြင့် ဂျပန်လုပ်ငန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူစားသုံးသူဖောက်သည် ဖြစ်လာပါမည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဂျပန်နိုင်ငံဘက်တွင် အခြေကုပ်ရယူထားရှိမှုသည် ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းသာမက ဂျပန်စာကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း မြင့်မားမှုနှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်း အောင် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် လိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း အတွေ့အကြုံ ရှိသည့် မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းရုံးစိုက်မည့်နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံးသတ်မှတ်ကာလအတွင်း မိမိလုပ်ကိုင်ရမည့် အလုပ်အားမှတ်မိသည်အထိ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းတက်နေဆဲကာလအတွင်း ဘွဲ့ရပြီးအလုပ်ချက်ချင်းဝင်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လျှောက်ထားပါက ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သင် (Internship) သဘောမျိုးဖြင့် အလုပ်ဆင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘွဲ့ရပြီးပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အင်မတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အလုပ်ဖြစ်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို ဖြန့်ကျက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ပါ၍ လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အလုပ်ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်မှာ မန်နေဂျာအဆင့်တာဝန်ယူနိုင်မည့် ထူးချွန်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံစေလိုသောကြောင့် စိန်ခေါ်လိုမှုစိတ်ဓာတ်အား ပိုင်ဆိုင်သူ အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး ကျန်းမာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအား ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်လိုပါသည်။
တောင်းဆိုထားသောအရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါထဲမှ တစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ထားပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(N1 သို့မဟုတ် N2)
(TOEIC 600မှတ် သို့မဟုတ် TOEFL pbt 505 မှတ် သို့မဟုတ် ibt 63 မှတ်)
အထက်ဖော်ပြပါထဲမှ တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
(သင်ထံတွင်ရှိထားပြီးပါက ကျွန်ုပ်တို့ကျေနပ်မည့် အရည်အချင်း)
•	မားကတ်တင်းဗျူဟာနှင့် အတွေ့အကြု့
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ယခုအချိန်မှစ၍ ပိုမိုကြီးထွားလာမည်မှာ အလွန်သေချာ လျက်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအား တိုးချဲ့ခန့်အပ်သွားရန်လည်း စဉ်းစားလျက်ရှိပါသည်။ အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မန်နေဂျာအနေနှင့် အရေးပါသောတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ဆက်ဆက် အတူတူအလုပ်လုပ်ကိုင်လိုပါသည်။
ဤသတင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တကယ့်လက်တွေ့မည်သို့မည်ပုံ အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ကို နားလည်ရန် မလုံလောက်သေးဟုထင်ပါ သောကြောင့် ပထမဆုံးအနေနှင့် အလုပ်လျှောက်ကြည့်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သင့်အနာဂါတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အချိန်ပေး ဆွေးနွှေးလိုပါသည်။
မန်နေဂျာလုပ်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အင်တာဗျူးနေရာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်အင်တာဗျူးနေရာမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၂ လပိုင်းမှ စတင်ပါမည်။
•	ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (N1 သို့မဟုတ် N2)
•	အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း (TOEIC 600မှတ် သို့မဟုတ် TOEFL pbt 505 မှတ် သို့မဟုတ် ibt 63 မှတ်)
・Those who like the manga “One Piece”
Those who enjoy taking part in company social events
Those who have the tendency to take on various challenges
Will depend on local standards
・ Recent graduate employees
・ Mid-career recruitment employees
(C)2016 Inforance All Rights Reserved.